IELTS TIPS – SLD EDUCATION
November 25, 2021 November 28, 2021 francisling
IELTS Academic Writing Part I Academic Writing ဆိုရင် နိုင်ငံတော်တော်များများက Band 6.5နဲ့အထက်ရတဲ့သူတွေ နည်းနေလို့ ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရလဲဆိုပြီး အဖြေရှာရင်း တွေ့ရှိလာတဲ့ အချက်တွေကို SLDကနေ share လုပ်ပေးသွားပါမယ်။ Online မှာ IELTS နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေလိုလို နည်းအမျိုးမျိုးပေးတဲ့ဟာတွေကြောင့် English တော်တော်ကောင်းတဲ့သူတွေတောင်မှ အမှတ်နည်းစေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ Cambridge က IELTS မေးခွန်းတွေထုတ်သူတွေ၊ အမှတ်ပေးစည်းမျဉ်းတွေထုတ်သူတွေဖြစ်တဲ့ Professorsတွေ၊ Test Writersတွေကိုယ်တိုင်ပေးတဲ့ guidelinesအများကြီးကိုအတိုချုံးပြီး၊ ကျောင်းသားတိုင်းနားလည်မည့် guidelines Read More …
IELTS TIPSLeaveacomment
IELTS Writing Task 1 ကောင်းကောင်းရေးနိုင်ဖို့….. Time Management Task 1 ကို အချိန်မှီအောင် ဘယ်လိုရေးမလဲ? မိနစ် ၂၀ နဲ့ အပြီးရေးနိုင်ဖို့ … Dos (လုပ်သင့်သည့်အရာများ) 1. Introduction ကို မြန်မြန်လေး pharaphrase လုပ်နိုင်အောင် ကျင့်ပါ။ (စာကြောင်း အရှည်တစ်ကြောင်းရေးနိုင်ရင် ရပြီ။) 2. Overview ကို main trends (no details) ပဲရေးကျင့်ပါ။ ပထမပိုင်းတော့ Main trends Read More …
IELTS Writing Task2ဘာလို့ ဒုက္ခရောက်ကြတာလဲ၊ ဘယ်လိုရေးသင့် ပြင်ဆင်သင့်လဲ (********************************************************************************************************************************************Note: Cambridge က IELTS မေးခွန်းတွေထုတ်သူတွေ၊ အမှတ်ပေးစည်းမျဉ်းတွေထုတ်သူတွေဖြစ်တဲ့ Professorsတွေ၊ Test Writersတွေကိုယ်တိုင်ပေးတဲ့ guidelinesအများကြီးကို ကောက်နှုတ် အတိုချုံးပြီး၊ ကျောင်းသားတိုင်းနားလည်နိုင်ပြီး အသုံးပြုနိုင်အောင် မြန်မာလို ပြန်ရေးပေးရခြင်းဖြစ်သည်…***********************************************************************************************************************************) Understanding the task (ရေးခိုင်းတဲ့ အပိုင်းတွေကို နားလည်အောင်လုပ်ခြင်း) Task2ဆိုရင် အမြဲတမ်း statements တစ်ခု (သို့) နှစ်ခုပေးထားပြီး၊ နောက်ထပ်မေးခွန်း တစ်ခု Read More …
IELTS နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျောင်းသား/သူတွေ မေးလေ့ရှိတဲ့ မေးခွန်းတွေ/ သိသင့်တဲ့ အချက်တွေကို ရေးပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ် IELTSအတွက် ready ဖြစ်ဖို့ ဘယ်လောက် ပြင်ထားသင့်လဲ IELTS (Academic) ကဘာကို တိုင်းတာလဲဆိုတာကို ရိုးရိုးပြောရရင် collegeတို့၊ MA/PhDတို့တက်ရင် စာလိုက်နိုင်ဖို့ English levelရှိလားဆိုရင် မမှာ:ပါဘူး။ ဉပမာ Englishကိုသုံးပြီးသင်တဲ့ ကောလိပ်တွေမှာ Philosophy Major, English Literature, Sociology, Law, etc. ထဲက Major တစ်ခုခုကို ယူမယ်ဆိုပါဆို့။ ခက်ခဲနက်နဲတဲ့ Read More …